Fifidianana Filoham-pirenena ao Shily; Amin’ny 15 Janoary ny Fihodinana Faharoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2017 3:40 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny Desambra 2005 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Amin'ny fiafaran'ny governemantan'i Ricardo Lago nandritra ny 6 taona, nandresy tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny isan-jato 45,87% i Michelle Bachelet (samy “La Concertación”), mitarika amin'ny isam-bato1 tapitrisa izy, manaraka azy i Sebastian Piñera izay nahazo vato 25,48%, avy eo i Joaquin Lavín amin'ny vato 23,25% (samy avy amin'ny firaisambe “Alianza Por Chile”). Tomás Hirsch, avy ao amin'ny “La Concertación,” izay nahazo ny maro an'isa tao amin'ny Antenimieran-doholona sy ny Antenimieram-Pirenena kosa nahazo vato 5,37% tamin'ny ny fifidianana.
Tamin'ny 10 ora hariva, adiny iray talohan'ny fanisam-bato farany, nisaotra ny vahoaka Shiliana noho ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana ny filoha Lagos, tamin'ny kabariny ho an'ny vahoaka tamin'ny fahitalavitra.
Nanamarika ihany koa ny filoha Lagos fa tsy demaokratika tanteraka ny rafi-pifidianana (binomial) amin'izao fotoana izao. Amin'ny rafitra misy ankehitriny, tsy maintsy mahatratra farafahakeliny avo roa heny amin'ny vato azon'ny mpifaninana aminy ny loholona sy solombavambahoaka raha te-ho mpandresy amin'ny fifidianana.
Na izany aza, amin'ny vokatra farany amin'ny fifidianana filoham-pirenena, mba hahafantarana izay hitantana ny firenena mandritra ny vanim-potoana vaovao 4 taona manaraka, tsy maintsy miandry ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana isika amin'ny 15 janoary 2006.
Mifanaraka amin'ny 96,72% amin'ny fitambaran'ny vatom-pifidianana iIreo vokatra ireo, ho an'ny tarehimarika antsipirihany tsindrio ato.
Ity ny famintinana ny hevitry ny bilaogera Shiliana hafa taorian'ny fifidianana.
Manaiky i Rafael IV fa efa nampoizina ny vokatra, saingy kandidà roa ihany no hifaninana amin'ny fihodinana faharoa, ka tsy mbola mazava izay fomba handatsahana ny vato teo aloha ho an'ireo mpifaninana hafa. Manantitrantitra ihany koa izy fa nandresy tao Antarctica ny kandidà Hirch.
Ny bolongana “El Pehuen” indray mampiseho antsipiriany bebe kokoa momba ny valim-pifidianana, sy ny antsipirian'ny fampielezan-kevitra, ary ny vola lany, anisan'izany ny sarintany fampiasam-bolan'i Pinera, sy ny fiovan'ny fampielezan-kevitra manaraka sasany (toy ny fanafoanana ny rafitra binomial).